Miady amin'ny fahanterana amin'ny alàlan'ny fanokanana fotoana handaminana ny fialan-tsasatrao
Taorian'ny efa ho roa taona nisian'ny adin-tsaina mifandraika amin'ny areti-mifindra dia may ny mpiasa amerikana — ary ny angon-drakitra vaovao dia manaporofo izany.
Mba hanampiana amin'ny ady amin'ny fahanterana sy hanentanana ny Amerikanina haka fialan-tsasatra tena ilaina, fikambanana fitsangatsanganana an'arivony manodidina ny Etazonia dia manasongadina ny isan-taona Drafitra nasionaly ho an'ny andro fialan-tsasatra (NPVD) tamin'ny 25 Janoary mba hamporisika ny Amerikana hanomana ny fotoana rehetra tsy iasàny amin'ny taona amin'ny fiandohan'ny taona.
Maherin'ny roa ampahatelon'ny (68%) amin'ny mpiasa amerikana no mahatsiaro tena ho may ary 13% no tena may. Fanampin'izay, maherin'ny antsasany (53%) amin'ny mpiasa an-tany lavitra no miasa ora maro kokoa ankehitriny noho ny tao amin'ny birao ary 61% no mahita fa sarotra kokoa ny miala amin'ny asa sy miala sasatra.
Na eo aza ny onjan'ny areti-mifindra farany, ny angon-drakitra avy amin'ny Destination Analysts dia nahita fa ny ankamaroan'ny Amerikanina nanao fanadihadiana dia ao anatin'ny toe-tsaina "vonona handeha" ary maniry ny hanomana fitsangatsanganana:
Ny 81% amin'ny Amerikanina dia faly manomana fialan-tsasatra mandritra ny enim-bolana manaraka
Efa ho enina amin'ny 10 (59%) no manaiky fa zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay ny dia ary ny 61% dia mikasa ny hanao ny dia ho laharam-pahamehana amin'ny tetibola amin'ny 2022.
Ara-tantara, NPVD dia natao hanampiana amin'ny famahana ny olan'ny Amerikanina tsy mampiasa ny fotoana rehetra azony isan-taona, na izany aza, ny fanambin'ny areti-mifindra dia nanome. NPVD zava-dehibe vaovao: fotoana hanomanana mialoha ny andro mamiratra sy hanesorana ireo adin-tsaina amin'ny fiainana andavanandro.
Taorian'ny efa ho roa taona niainana niaraka tamin'ny areti-mifindra, ny Amerikanina dia tena mila fanavaozana izay atolotry ny fialan-tsasatra, na akaiky na lavitra izany. Drafitra nasionaly ho an'ny andro fialan-tsasatra no fotoana tsara hipetrahana miaraka amin'ny fianakaviana sy ny namana ary hanao drafitra momba ny fialan-tsasatra tena ilaina mandritra ny taona sisa.
Na dia ny hetsika tsotra amin'ny fikarakarana fialantsasatra aza dia afaka manampy amin'ny fandroahana ny blues amin'ny ririnina. Efa ho ny telo ampahefatry (74%) amin'ireo mpandrindra no nitatitra fa tena faly na faly tokoa ny miandry sy manomana fialan-tsasatra ho an'ny taona ho avy raha oharina amin'ny efatra amin'ny 10 tsy manao drafitra.
Na izany aza, ny sakana mifandraika amin'ny asa — toy ny enta-mavesatra be sy ny tsy fahampian'ny mpiasa — no sasany amin'ireo antony lehibe manakana ny Amerikanina tsy hampiasa ny fotoanany.
Ny votoatin'ny media sosialy ho an'ny Drafi-pirenena ho an'ny Andro fialan-tsasatra dia hasiana marika amin'ny fampiasana #PlanForVacation.
Ny fitsaboana nampidirina tany am-boalohany tamin'ny fitsaboana ny homamiadan'ny nono dia manome fanantenana Etazonia|
Florida-Caribbean Cruise Association dia miara-miasa amin'ny Cayman Islands
Previous Ny antsasaky ny Airbus Fleet dia tsy azo antoka araka ny Qatar Airways
Manaraka Ny valan-javaboary Tanzaniana dia nomena anarana ho toerana tsara indrindra ho an'ny mpankafy an-kalamanjana